Soosaarayaasha Robot Arc Alxanka - Shiinaha Alaab-qeybiyeyaal Robot & Warshad
MOTOMAN-AR aalado taxane ah
MOTOMAN-AR aalado taxane ah siiyaan waxqabad awood leh alxanka qaansada codsiyada. Naqshadeynta muuqaalka fudud waxay ka dhigaysaa robot-cufnaanta sare fudud oo la rakibo oo la nadiifiyo, waxaana si buuxda loogu habeeyay adeegsiga bey'adaha qalafsan. Taxanaha 'AR' wuxuu leeyahay taxane ah barnaamijyo horumarsan wuxuuna ku habboon yahay dareemayaal fara badan iyo qoryaha alxanka.
Marka loo barbar dhigo MOTOMAN-AR2010 ama MOTOMAN-MA2010, waxay ku guuleysatay xawaareyntii ugu sarreysay waxayna kaalin wax ku ool ah ka qaadatay hagaajinta wax soo saarka macaamiisha.
Faasas la xakameeyey
Max Shaqada Range
210 ° / seken
220 ° / seken
435 ° / seken
700 ° / seken
Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, Qabashada Gacanta Robot, 6 Axis Qabashada Robot, Robotka Gacanta otomaatiga ah, Aaladda otomaatiga ah ee Robot,